Isikhathi esiningi lamaphepha epetition ahambisana nekhandlela. Uyaligoqa iphepha bese ulibeka ngaphansi kwekhandlela lakho elivuthayo. Ukuligoqa (fold) ngenhloso yokulahla ibhadi, uligoqa liye kwi-opposite direction, bese uli-roundisa ka-left, uligoqe okokugcina. Uma ufuna inhlanhla, uthando, imali nokunye okuhle, uligoqa lize kuwena, bese uli-roundisa (rotate) ka right 90 degrees, bese uyaligoqa futhi lize kuwe okokugcina bese ulibeka ngaphansi kwekhandlela. Ikhandlela lizovutha lize lifike kuleliphepha. Abanye leliphepha eliyi petition bayalishisa ekhandleleni, ngalesikhathi livutha leliphepha balibeke eplatin eli-clean elimhlophe eduze nekhandlela.
Ukugcoba oil ephepheni
Uzobe ke usugcoba ama oils akho ephepheni lakho, uqale ecorneni laka right, uhambe clockwise. Uma ugcoba i-corner ugcoba wenze i-circle, nayo i-circle iba clockwise. Uma ukhipha ibhadi, noma uxosha okubi, ugcoba wenze i-circle eba anti-clockwise.
Esikhathini esijwayelekile ubhala i-petition ngepeni elihambisana nekhandlela. Isibonelo: uma uya kwinterview ubhala igama lozoku interviewer nge ink egreen, uma uya e-bank uyofuna usizo lwemali ubhala igama lalona ozokusiza nge-ink egreen, uma ubhala i-petition yokubuyisa indoda yakho uzobhala ngombala obovu. Umsebenzi wona uzobhala ngepeni eli-green, ukuxolisana nomuntu uzobhala ngepeni eli-blue, ukwelapha umuntu uzobhala ngepeni eli-blue, lemibala obhala ngayo yimibala ehambisana namakhandlela.
Kwiphepha lakho uzobhala ufake nama-symbols, isibonelo: uma kuyi petition yemali uzofaka isign yemali ($), uma ku-petition yothando uzofaka i-sign ka love, uma kweyomsebenzi uzofaka i-sign yemali, uma ufuna uxolo uzofaka i-sign ye peace. Uma wenza i-petition yokuthi umuntu akuphuphe, bhala izithombe senyanga nezinkanyezi. Lapho ungenaso isiqiniseko se-sign okumele uyisebenzise, ngena ku google useshe izithombe ze-sign oyidingayo.